Home News Dowladda Maraykanka ayaa dar-dargalinayso howl-galada ka dhanka ah kooxda Al Shabaab
Dowladda Maraykanka ayaa dar-dargalinayso howl-galada ka dhanka ah kooxda Al Shabaab
Dowladda Maraykanka ayaa sanadkii la soo dhaaafay ee 2017 ka fulisay dhulka Soomaaliya weeraradii ugu badnaa ee ay ku qaaday kooxda argagaxisada ee Al Shabaab. Qormo ay soo saartay Joornaalka loo yaqaano FDD’s Long War ayaa lagu sheegay in sanadkii la soo dhaafay Ciidamada Maraykanku ay ka fuliyeen Soomaliya ilaa 31 weerar oo lagu qaaday kooxda Argagaxisadda Al Shabab. Tani oo ka dhigaysa weraradii ugu badnaa marka la isku geeyo weerarada ay qaadeen Ciidamada Marayanka tobankii sano ee ugu danbeeysay. Todobadiii bilood ee ka baxay sanadkan 2018 waxaa la qaaday 16 howlgal oo looga horjeedo Al Shabab. Waxaana Joornaalku sheegay in guul wayn laga gaaray howl-galadaas. Afhayeenka AFRICOM Samantha Reho ayaa sheegay in la dardargalin doono howlgalada lagu cirib tiraayo kooxaha Argagaxisadda iyada oo la isticmaaliayo AMISON.
Qoraalka oo buuxa halkaan ka aqriso
Previous articleMW Sharif Xassan oo kulankii maanta ka sheegay in uu markale yahay Musharax
Next articleMW Gaas: Hadii Kheyre lacag soo dirsaday oo yidhi sawiradeeda ha la ii dhajiyo, waa muwaadin Somali ah xaq buu u leeyahay!